Bonke Abanye Abathengisi Bezindlu Bathengiswa futhi Abakhokhela eCrawley, eWest Sussex
Uhlu Lwezakhiwo: Bonke Abanye Abathengisi I-West Sussex Crawley
I-1 - 10 yohlu lwe-157
Isifinyezo ** ukunikezwa okukhethekile - intela encishisiwe engu- $ 1,000 ezinyangeni ezintathu zokuqala '** Indlu enamakamelo amabili eyakhiwe yanamuhla etholakala endaweni eyaziwayo yePease Pottage indawo etholakala kahle ekufinyeleleni izixhumanisi ze-M23 / M25 futhi isondele naseCrawley nase idolobhana lase Handcross. Ukuqunjelwa kuhlanganisa ...
* Indlu enkulu yokulala eyodwa * Izilwane ezifuywayo zicatshangelwe
** ayikho inketho yokubambisa etholakalayo kule ndawo - ngicela ubuze imininingwane ** Igumbi elilodwa lokulala, umamoseette wokuqala owakhiwe e-Ifield. Lendawo ihlanganisa: I-Hallway enezitebhisi ukuya phansi kuqala, indawo yokuphumula yosayizi omuhle, ikhishi ngezinto zokwenza izinto, igumbi lokulala elinezindlu ezimbili ezilinganayo namakamelo okugeza afakwa endlini yangasese. I ...
I-2 Bed Maisonette Iyathengiswa eCrawley, eWest Sussex
Summary35% shared ownership.A beautifully presented two bedroom home, ideal for those wishing to get on to the property ladder. Large open plan living/dining/kitchen area, family bathroom and parking. Located in the popular village of Crawley Down.Description35% shared ownershipThis is a lovely two ...
Crawley in West Sussex, Rh10 4us
Published by Connells - Copthorne
Imphetho yendawo yokulala ebanzi ephindwe kabili ebekelwa eduze kwezitolo zendawo nezixhumanisi zebhasi. Uma singena kule ndawo ngakwesokunene kunegumbi lokuphumula elikhulu, lokhu kuholela ekhishini elinosayizi omuhle onemishini kufaka phakathi umshini wokuwasha, ifriji elingaphansi, i-freecounter efrijini ne-ele ...
Ama-Home Partnership Lettings kanye nabaphathi bajabule ukunikela ngaleli gumbi eliphindwe kabili ngaphakathi kwesabelo sendlu yobuchwepheshe. Ukuphela kwempahla yethrafikhi kutholakala endaweni yokuhlala yase-Ifield West futhi izakhiwo ezabiwe zifaka indawo yokuphumula engemuva, ikhishi / i-diner elungiswa kabusha eyakhiwe ku ...
Ubambiswano Amakhaya luletha emakethe yezinsizakalo lokhu kusanda kulungiswa futhi kufakwe ngokuphelele igumbi eliphindwe kabili ngaphakathi kwesabelo sendlu yobuchwepheshe. Ngokuxhumeka okukhulu kwezindawo zokuxhumana eziseduzane futhi kungakapheli ibanga lokuya eCrawley Town Center, abaqashi bazosizakala nasendlini yokuphumula / edliwayo eyindilinga, ezimbili zokuxhumana ...
Ama-Home Partnership Lettings kanye ne-Management ajabulile ukunikela ngaleli gumbi eliphindwe kabili elinegumbi lokugezela elisezingeni elifanele ngaphakathi kwesabelo sendlu yobuchwepheshe. Ukuphela kwempahla yethrafikhi kutholakala endaweni yokuhlala yase-Ifield West futhi izindawo ezabiwe zifaka indawo yokuphumula engemuva, ehlaziyiwe ...
AbakwaGreenaway Residence Estate Agents eCrawley bayakujabulela ukunikela ngaleli gumbi elinamametheette amabili aphansi okulala abekwe endaweni efiselekayo kaFenace Green, atholakala kusukela ngomhlaka 30 Ephreli 2020 ngokungashabalali. Iziteshi zesitimela ezintathu zamabhuloho amathathu noCrawley centr wedolobha ...